Ikhabethe elihle lezingodo phakathi kweKarmeli/Isigodi saseJizreyeli - I-Airbnb
Ikhabethe elihle lezingodo phakathi kweKarmeli/Isigodi saseJizreyeli
U-Ilana Ungumbungazi ovelele
endaweni enhle yezwe lakwa-Israyeli, phakathi kwezintaba zaseKarmeli kanye neSigodi saseJezreel, ikhabethe lelogi elibanzi eliyingqayizivele elinezitezi ezi-2, imibhede engu-3, ikhishi langasese nendawo yokugezela kanye nevulandi enombono omangalisayo. iyunithi etholakala engxenyeni endala ye-Yoqneam Illit imizuzu embalwa nje ukusuka kumaPaki amaningi nezokungcebeleka kanye nemvelo ekhangayo endaweni yaseRamot Menashe naseKarmeli. Kukhona indawo yokuthenga eseduze nesiteshi sebhasi eduze kwe-unite.
Ikhabethe lamalogi liyindlu yezivakashi ebanzi ehlome kahle eseduze kwendlu yangasese enegceke okwabelwana ngalo. Iyunithi yesitezi esi-2. Ikhishi, indawo yokugezela kanye nendawo evamile esitezi esiphansi, indawo yokulala esitezi esiphezulu esinombhede wosayizi wendlovukazi kanye nomatilasi abangu-2 abangabodwa abanazo zonke izinsiza ezidingekayo.
4.77 out of 5 stars from 146 reviews
4.77 · 146 okushiwo abanye
Ingxenye endala ye-Yoqneam imizuzu kude neMoshava, Hazore'a Kibutz kanye namaPaki nokuzilibazisa eduze njengeNahal Shofet, Tel Yoqneam nePark Keret. Imizuzu engu-20 ukusuka e-Haifa nase-Afula, imizuzu engu-30 ukusuka eNazaretha, imizuzu engu-15 ukusuka eZichron Yaakov nasebhinyamina, imizuzu engu-15 ukushayela ukusuka ogwini logu lwaseKarmeli.
Itholakalela imibuzo nanoma yiziphi izidingo lapho uhlala khona ngocingo futhi mathupha. indlu yethu iseduze kwakho!
UIlana Ungumbungazi ovelele